Vatongi Vashanu Vanotora Mhiko Kuitira Kuti Vagare paBhenji reConstitutional Court
Acting Chief Justice Elizabeth Gwaunza Swearing In Ceremony
Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika, Amai Elizabeth Gwaunza, vatoresa vatongi veshanu vedare repamusoro soro mhiko yekushanda basa hurumende ichiti hapana kana dambudziko pamashandiro ematare edzimhosva sezvo matare ose ari kushanda sezvaanotarisirwa kuita.
Vatora mhiko sevatongi vedare reConstitutional Court ndiJustice Paddington Gware, Justice Rita Makarau, Justice Anne Mary Gowora, Justice Ben Hlatshwayo naJustice Bharat Patel.
Vashanu ava vakadomwa nemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nezuro uye vange vagara vari vatongi vedare reSupreme Court kunyange hazvo vange vakasanobata zvinzvimbo zvevatongi vedare repamusororo.
Munyori mubazi rezvemutemo, Amai Virginia Mabhiza, vati kugadzwa kwevatongi vedare repamusoro soro kutevedza bumbiro remutemo wenyika.
Panyaya yatsviriridza munyika yemutongo wedare reHigh Court wakaendesa vaive mukuru wevatongi munyika, Justice Luke Malaba pamudyandigere, Amai Mabhiza varamba kutaura zvakawanda asi vakati nyaya yekuti vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court, inoratidza kuti hurumende ine chivimbo chekukunda.
Vatongi vese vedare reSupreme neConstitutional Court vakadomwa munyaya iyi uye nyanzvi dzinoti pave nedambudziko munyika panyaya yekuti ndiana achanzwa nyaya iyi kudare reSupreme kana kuti Constitutional Court.
Asi Amai Mabhiza vati hapana kana dambudziko sezvo matare ese munyika ari kushanda zvakanaka.
Asi yanzvi munyaya dzemutemo, VaDavid Hofisi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine kutaura kwakwawanda, vanoona sekuti nyaya iyi ichangotongwa sematongerwo ayakaitwa kuHigh Court. Vati kudoma vatongi vese vematare epamusoro hazvirevi kuti havana goni kunzwa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzemutemo, Dr Justice Alfred Mavedzenge, vati dambudziko handimutongo weHigh Court kana nyaya dziri kumatare asi kuti inyaya yekuti Zimbabwe inyika isingatevedze mitemoyayo.
Mukuru weZimbabwe Human Right NGO Forum, Dr Musa Kika, pamwe nesangano remagweta echidiki, reYoung Lawyers Association of Zimbabwe, vakaenda kudare reHigh Court vachipikisa kuwedzerwa kwanguva yaVaMalaba vari pabasa nemutungamiriri wenyika achishandisa Constitutional Amendment Number 2 Act.
Svondo rapfuura High Court yakabvumirana naVaKika nemagweta echidiki rikati VaMalaba vaende pamudyandigere sezvo vakasvika makore makumi manomwe ekuzvarwa.
Asi hurumende yakapikisa izvi.